Ungayifaka iWindows 8.1 ngaphandle kwesitshixo? - Iwindows
Eyona > Iwindows > Isitshixo seWindows 8.1 sokufaka - iimpendulo eziqhelekileyo kunye nemibuzo
Isitshixo seWindows 8.1 sokufaka - iimpendulo eziqhelekileyo kunye nemibuzo
Ungayifaka iWindows 8.1 ngaphandle kwesitshixo?
Inkqubo ye-indlela ekhawulezayo neyona ilulaukufaka iWindows 8.1 ngaphandleimvelisoisitshixokukwenza ifayileIWindowsUkufakwa kwe-USB drive.ThinaimfunoukuyaKhuphela ifayile yeWindows 8.1ISO ukusukaIMicrosoft ukuba thinandingenayo. Ke,singaSebenzisa i-4GB okanye i-flash drive enkulu ye-USB kunye neapp, enje ngeRufus,ukuyayenza ifayile ye-Windows 8.1ufakelo USB.Ngomhla we-12 ku-2017
Kukho iinxalenye ezimbini kwesi sifundo. Qala ngokuskena iifayile zokufaka, nokuba kungumyalelo okanye ngokukopa. Okwesibini kule veki ukuze kwixesha elizayo ubize iWindows 8 ukuze weqe loo ndawo apho kufuneka ufake isitshixo semveliso ndifumene i-ISO apha eyifayile yedijithali yediski ebonakalayo endikhuphele yona kwiwebhusayithi onayo xa Ilungelo lakho phezu komkhenkce esikolweni likhuthaza ukothuka kwintambo nganye beka iifowuni naphina apho ndenze khona ifolda kwidesktop ebizwa windows 8 cinezela kulungile kwaye ulinde xa ubuya uziphu iFlorencecan ngoku, uthetha ngeqweqwe eligqunyiweyo, ndinayo i-ISO apha cofa ekunene kwaye uthathe inyanga, unganaso nesoftware ebeka iifayile ze-ISO okanye ukuba unediski kwiwindows 8 kusekuqala kwi-optical drive emva koko uye kwikhompyuter yam okanye nantoni na oyibizayo kwaye uye kwidrive ken, akufuneki ubenefestile enamagama kwaye iyaphambuka yile siza kuyikhetha, cofa kuyo kwaye ucofe uvule okanye ungavumi nje ukuba uyijonge, kumnandi ngoku sineefayile ezicinezelweyo Ctrl T kwaye ucinezele Ctrl T kwaye ukope okanye uzame ukubeka ibhasi naphina apho ndifuna khona kwakhona Ngokudibeneyo wenze ifolda kwaye ubeke iifayile apho kwaye ngoku kuya kufuneka ulinde de yenziwe xa ikopi yenziwe, ngoku ungaya kwaba bathathu ukuze uqhubeke nokuchwetheza incwadana yemoto kwaye oku kuqhelaniswa iya kuba nguwe ukusebenzisa, kodwa ungayitshintsha nangona ufuna ukuba ufuna uhlobo olukhuni okanye uhlobo lwe-OEM kunye / okanye ilayisensi yevolumu.
Ndicebisa ukuba ungasebenzisi i-OBM okanye uvule ivolumu yendlela ye-cyberbully ngaphandle kokuba uyiloluhlobo lwemiyalezo oza kuyisebenzisa kwixesha elizayo ukugcina oku kutshintsha, jonga ukuba ubuza njani zonke iifayile kwaye utshintshe igama lefayile de ndikhuphe i-CFG emva koko ndibethe ku-Gcina ngoku Ndenze iqhinga Ungazifaka ezi fayile zokufaka kwi-CD okanye i-USB drive kwi-bootable drive, kodwa lelinye inqaku endicinga ukuba ndilayisha iWindows 8 apha ngezantsi? ukuba singasibona isibonelelo, okanye ukuba uza kusibona, kodwa ngekhe uqaphele, kodwa uyabona ukuba uhleli phantsi njengoko uthunga okanye uqala ukuphendula kwisip, cofa ngokulandelayo kwaye uya kusibona ukuba akukho sidingo ngenisa amaqhosha emveliso. Amanqaku akhawulezileyo Ngamanye amaxesha uyakuboniswa ngescreen kwiWindows kwaye ezinye izinto ziya kukhubazeka, njengoko zilungiselelwe ngaphakathi, kungoko usafuna ukwenza iifestile zakho. Hayi ngokonwabela imveliso kwaye enkosi ngokubukela inqaku, ngazo zonke iindlela ubhalise ukuba uyafuna kwaye uyathanda okanye awukuthandi ngakumbi okanye ukunika izimvo kwezakho izimvo okanye iingcebiso.
Bukela kwelinye inqaku
zilinganise ii-ics zokuncamathisela
Ndisifumana njani isitshixo sam selayisensi yeWindows 8.1?
Nokuba kwi-Prompt yewindows okanye kwi-PowerShell, ngenisa lo mthetho ulandelayo: wmic path softwarelicensingservicefumanaOA3xOriginalProductKey kwaye uqinisekise umyalelo ngokubetha 'Ngena'. Inkqubo iya kukunika iimveliso yenaniukuze ubhale phantsi okanye ukope ngokulula kwaye uncamathisele kwenye indawo.13 eyek. 2020
Namhlanje siza kusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo ukufumana isitshixo seMveliso yeWindows, eluhlobo lwamagama angama-25 okanye iileta ozifakayo ngexesha lokufakwa kwekopi yokuthengisa yeWindows.
Ubuncinci enye yeendlela kweli nqaku ziya kukuvumela ukuba ufumane isitshixo semveliso yeWindows 7, 8, 10 kunye neenguqulelo zeseva yeWindows. Xa undwendwela isikrini sakho sokuvula, unokubona into efana ne-ID yakho yeMveliso, kodwa i-ID ephambili yeMveliso ngokwayo ayifikeleleki; Nangona kunjalo, ukuba unelayisensi yedijithali, iphepha-mvume lakho aliyi kuba neKhikhi yeMveliso enxulumene nayo. Kwimeko apho, eli nqaku alisebenzi kuwe, kodwa nokuba unelayisensi yedijithali, usenokufumana isitshixo kwi-BIOS yelaptop okanye kwidesktop eyakhelwe kwangaphambili ukuba umenzi ukhethe ukuyifaka kwi-BIOS .
Ndizokuya kule meko yokusetyenziswa ekupheleni kwenqaku. Ngeentsuku ezindala ezimnandi, isitshixo semveliso sasihlala siprintwa kwiSatifikethi sokuNgqinisisa esiza nentengiso okanye i-OEM inguqulelo yeWindows, kwaye kamva yancanyathiselwa njengesitikha ndaweni ithile kwikhompyuter uqobo. Ezi iilebheli zinokubonakala kwiikhompyuter zedesktop ezize nohlobo lwazo lwe-OEM yeWindows efakiweyo, njengoko kubonwe kule Dell Precision endala, okanye kwiilaptops zihlala zibekwa apha ngezantsi, njengale Lenovo indala eza neWindows 7.
Le ilebheli iya kuba yeyona ndlela ilula yokufumana imveliso yakho, kwaye nanamhlanje inguqulelo ethengisiweyo yevenkile Windows 10 kufuneka ubenayo. Nangona kunjalo, awusayi kuphinda ufumane ezi zincamathelisi kwiikhompyuter zangoku ezakhiwe kwangaphambili. Endaweni yoko, isitshixo semveliso sikwi-BIOS okanye i-UEFI, apho kungenakufikeleleka ngokubanzi kubasebenzisi.
Umzekelo, akukho ndawo ifumanekayo kwi-BIOS yale khompyuter ye-HP Pavilion, kwaye ayibonakali kule Dell Inspiron 5570 enayo Windows 10 Isitshixo semveliso esifakwe kwi-PC ye-BIOS okanye ilaptop eqhuba uhlobo lwe-OEM yeWindows 8.1 okanye 10 yafakwa kwangaphambili, ungasebenzisa enye yezixhobo zeWindows ezakhelweyo. Inye ngokulula yi-Command Prompt, onokuthi uyiqalise ngokunqakraza kwiqhosha lokuqala kunye nokuchwetheza i-CMD.
Cofa kwikhonkco elivelisayo ukuze usungule i-Command Prompt, emva koko chwetheza: wmicpathsoftwarelicensingservicegetoa3xoriginalproductkeyKuba lo myalelo umde kangaka, ndiwufakile kwinkcazo xa ufuna ukukopa kwaye uncamathisele. Emva kokucinezela u-Enter, iqhosha lemveliso liya kubonakala. Khumbula, njengoko le ilayisensi ye-OEM, ibotshelelwe kwizixhobo zekhompyutha ezifakwe kuyo iiWindows.
Enye indlela kukusebenzisa iPowerShell, ongena kuyo kwakhona ngokunqakraza iqhosha lokuQala kunye nokuchwetheza i-Powerhell. Emva kokucofa kwiziphumo ezibuyisiweyo, vele uthayiphe: (get-wmiobject-query'select * fromsoftwarelicensingservice '). Oa3xoriginalproductkey kwaye hit hit, nayo ndiyibandakanyile kwinkcazo ukuba ufuna ukukopa / uncamathisela Njengenqaku elisecaleni, ukuba ndingena kwakhona kumyalelo ngokucinezela utolo oluphezulu nokucima indawo yayo yokugqibela, iya kuthi ikubonise ulwazi oluninzi malunga nelayisensi yakho.
Nceda uqaphele ukuba ezi ndlela zimbini zifumana kuphela amaqhosha emveliso akwi-BIOS agciniweyo. Kodwa uza kuthini ukuba unePC owazakhela yona, kunye nohlobo lokuthengisa lweWindows, okanye olunye uhlobo ozifakele lona isitshixo semveliso? Ukuba uzama ukusebenzisa indlela ekhawulezayo yokuyalela kwikhompyuter eyenziwe ekhaya akunakulindeleka ukuba ubuyisele isitshixo njengoko ubona apha. Uyakufumana into efanayo ngePowerShell apho kungabuyiswa nto emva kokungena kumyalelo.
Iprodukey yeNirsoft yi-freeware engagcini ngokufumana kuphela amaqhosha emveliso yeWindows efakwe kwi-BIOS, kodwa ikwarekhodwe kwirejista. Njengenzuzo esecaleni, inokubonisa izitshixo zeOfisi yeMicrosoft, iSQL Server, iVidiyo yeVidiyo, kunye nesoftware yeAdobe kunye neAutodesk. Ukukhuphela i-ProduKey, yazisa isikhangeli sakho osithandayo kunye nokukhangela i-NirSoft ProduKey, i-spell produkey.
Cofa umphumo wokuqala obuyiselwe kuqala, emva koko ucofe ikhonkco elikusa kwicandelo lokukhuphela. Ukuba une-32-bit version yeWindows, kuya kufuneka ucofe ikhonkco lokuqala. Uninzi lwenu luya kusebenzisa ikhonkco lesibini kuhlobo lwe-64-bit lweProduKey.
Xa ndigcina le fayile, kukho ithuba lokuba ii-Malwarebyte okanye iiWindows Defender ziyifumanise zinobungozi njengoko ubona apha. Kodwa njengoko umphuhlisi wenkqubo eqinisekisa, iiphakheji ezininzi ze-antivirus zinika ingxelo ngeProduKey njengezinto ezingezizo. Kwimeko yeWindows Defender, ufuna ukudlula kukhuseleko ngokuvumela inkqubo kwisixhobo kwaye ucofe iqhosha lokuQala lokuSebenza.
Masicofe Vumela ukuyikhusela ekuthintelweni. Emva koko kuya kufuneka siyikhuphele kwakhona. Masivule ifolda ebibekwe kuyo kwaye sijonge imixholo yefayile exinyiweyo.
Ngoku unokubeka umxholo naphina. Ngeenjongo zale khokelo, ndiza kuzibeka kwifolda 'yamaXwebhu'. Okulandelayo, konke okufuneka ukwenze kukumilisela i-ProduKey ephunyeziweyo.
Njengoko ubona apha, inokubonisa imveliso ephambili egcinwe kwi-BIOS okanye, ukuba uyayiqhuba kwikhompyuter engeyo-OEM, yitsale kwirejista, ukuba ungena kwiWindows ngeakhawunti yeMicrosoft, okanye ungafumana iphepha mvume elithengwe ngeMicrosoft, okanye ukuba uphucule ukusuka Windows 7 okanye 8 ukuya Windows 10 ngexesha lokuphuculwa simahla kweMicrosoft kwiminyaka embalwa eyadlulayo, mhlawumbi unelayisensi yedijithali. Ukuba usebenzisa iProduKey yeNirSoft, usenokwazi ukubona isitshixo. Naliphi na iqhosha elibethelelwe kwi-BIOS liya kufumaneka, kodwa lakho Windows 10 ilayisenisi iya kuba yidijithali.
Apha ndibonisa iProduKey isebenza kwi-Asus Transformer apho bendiphucule iWindows 8.1 yoqobo kwiWindows 10. Ndiyabona isitshixo selayisensi yohlobo oluthile eyabelwe iMicrosoft Windows 10 kwaye ndisafumana isitshixo sokuqala seWindows 8.1 kwi-BIOS ndiyathemba ukuba ndikonwabele- enkosi ngokubukela!
Ndiyifaka njani iWindows 8.1 ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft?
Ukuseta njaniIWindows 8.1 ngaphandle kweAkhawunti yeMicrosoft?
Qalisa ikhompyuter yakho kwiUfakelo lweWindows 8.1I-DVD okanye i-USB drive, kwaye ulandele isethingi yewizard de ubone isikrini apho ucela eyakhoIakhawunti yeMicrosoftukuqhubeka.
Faka into engekhoyoIWindowsPhilaiakhawuntiokanye igama eligqithisiweyo elingalunganga njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo.
Molo, lo nguNick kunye noNick's Computerfix-Yiza nali inqaku lendlela yokukhuphela iWindows 8.1 ngqo kwiMicrosoft kwisikhangeli sasimahla se-intanethi esenzeka ukuba sibe yiFirefox kwidesktop yam kwaye nje ukuba ndiyivule ndiye kwinjini yokukhangela endiyithandayo, okwenzeka ukuba kube nguGoogle kwaye ndiza kuchwetheza amagama okhuphelo lweWindows 8.1 kwaye hit hit kwaye iya kuvula amakhonkco onokuthi ucofe kwaye leyo sinomdla kuyo yeyokuqala i-windows 8 ngu-oh microsoft kwaye hayi, ayenzi njalo yithi 8.1 kodwa ithi 8.1 kwinkcazo ke qhubeka ucofe kuloo nto kwaye izakuvula iphepha lokukhuphela isoftware yeMicrosoft kwaye kukho idilesi ye-url apho kanye xa ukhuphelo windows 8.1 Ikhasi livulekile kwikhompyuter yakho, skrolela ezantsi kwaye ucofe eli qhosha lesixhobo sokuKhuphela ngoku kwaye liza kuqhubeka kwaye livuleke okanye ngenene kwaye uchwetheze oku kukhawulezisa ngaphandle kwe-rderung um kwaye uthi ufuna ukugcina isixhobo sokwenza imithombo yeendaba kwikhompyuter yakho kwaye ndiza kuthi ewe gcina ifayile kwaye kwi-firefox ndingaya apha kwaye Cofa kolo tolo lokukhuphela kwaye liza kubonakala ngenkqubela phambili yokukhuphela kwaye kuya kuthatha ixesha ukuba ukhuphele oku kuthatha imizuzwana embalwa kakhulu kwaye ndinokucofa indawo eneenkcukacha apha kwaye ndibone apho igcinwe khona kwikhompyuter yam kwaye ndinako Cofa kabini apha kwifolda kwaye iya kuphehlelela isixhobo sokudala imithombo yeendaba kwaye inyathelo lokuqala endilifumanayo sisilumkiso sokhuseleko, ndifuna ukuqhuba oku kwaye ndiza kuthi ewe ndifuna ukubaleka kuba ikhuselekile ngokupheleleyo kwaye iza ngqo kwiMicrosoft kwaye yintoni le-10 eza kundinika ulawulo lweakhawunti yomsebenzisi ithi ndifuna ukuvumela le nkqubo ukuba yenze utshintsho kwikhompyuter yam? kwaye impendulo nguewe kuba ndifuna ukuqala ukufaka iiWindows, hayi ukufaka kodwa ukukhuphela iWindows 8.1 kwikhompyuter yam apha kwaye ndifumana lo myalelo wokuba ndiphendule imibuzo emithathu kwaye olokuqala lulwimi kwaye ndibethe utolo lokukhuphela apha kwaye ucofe ezantsi kwaye ucofe isiNgesi ukuba yintoni i-united states kwaye le isebenza kum, umbuzo olandelayo ngowuphi ushicilelo kwaye ndicofa windows 8.1pro ngoku umbuzo wakho ulungile ukuba ndazi njani ukuba loluphi uguqulelo endinalo kulula ukulufumana, yehla apha kwimenyu yokuqalisa kwaye ucofe ekunene kwiwindows 8.1 kwaye ucofe kwinkqubo kwaye eya kuvula inkqubo yolwazi lwewindows 8.1.
Ndixelele ukuba ndisebenzisa iWindows 8.1 Pro apha, inguqulelo yakho ingafana okanye inguqulelo eyahlukileyo kunye nohlobo lwenkqubo oluguqulelo oluncinane lwama-64 ngoko nje ukuba ndigqibe okanye ugqibile ukuba loluphi uhlobo lweWindows 8.1 onalo, ungakhetha Ushicilelo oluchanekileyo kunye nolwakhiwo oluchanekileyo, kwimeko yam luyi-64-bit, kwaye xa uyenzile ezantsi apha kwaye ucofe ecaleni kwe-vedas iyaqala ukuba ndenze eyokuqala kwaye ikhethwe ngokungagqibekanga okanye ndingakhetha Okwesibini ndiza kuyenza ukukhuphela ifayile ye-ISO kwikhompyuter yam, efanelekileyo ukutshisa umfanekiso wediski kwiDVD kamva, xa sele ndijongile, ndiza kuhla apha ndibethe ngokulandelayo kwaye okulandelayo kucacile Apho ndifuna ukugcina le fayile ye-ISO kwikhompyuter yam kwaye ndiza kuyigcina kwisikhombisi sokukhuphela esingagqibekanga i st kwaye wena ungakhetha isikhombisi esinefolda esahlukileyo ukuba uyafuna, kodwa ndiza kuyishiya njengengagqibekanga kwaye ndinike ligama elahlukileyo kwiWindows.
Kulungile, iyaqhubeka kwaye iqala ukukhuphela kwaye oku kuyakuthatha ixesha ngokuxhomekeke kwisantya kunye nokusebenza kweelaptop yakho okanye ikhompyuter yedesktop, isantya somboneleli wakho we-intanethi kunye nokuba uxakeke kangakanani iiseva zikaMicrosoft zokukhuphela ngeli xesha usenza oku kungathatha ukuya kuthi ga kwiiyure ezininzi zokukhuphela, ke yiba nomonde kwaye uhlale phantsi kwaye andinguye andizukuhlala apha ndikudike ekubukeni oku kukhuphela ixesha elide kumlingo wokuhlelwa kwenqaku. Ndiza kukukhawulezisa oku kwaye ndiye kwinyathelo elilandelayo nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe ngexesha lokukhuphela kwaye ngokuqinisekileyo aluthathi xesha lide, lihamba ngokukhawuleza kwaye nje ukuba iifayile zikulungele ukwenza i-ISO iqala ukwenza ifayile ezakwenzela yona. Gcina ukhumbula ukuba oku kuya kuthatha imizuzu embalwa ngaphambi kokuba ufumane inqaku lokugqibela apha Ukutshisa ifayile ye-ISO kwiDVD izokuxelela indawo ekuyo ifayile ye-ISO onokuyisebenzisa okanye onokuyitshisa iDVD ngalo mzuzu ucofe ugqibezele kwaye uyitshise kamva .
Xa ucofa u-Gqibezela ungaya kwifolda equlathe i-ISO, kwimeko yam yayiyeyeyokukhuphela ifowulda kwaye ucofe ekunene kwi-ISO ngaphambi kokucofa iBurn Disk Image, kulungile ibiyiyo le khokelo
Ngaba ikhona indlela yokufaka iWindows 8.1 ngaphandle kwesitshixo?
Isixhobo sokusetha iWindows 8.1 asizukukhuphela isitshixo, kodwa siya kukhuphela iWindows 8.1 ngesiqhelo. Khetha ukufaka ngokudala ukhetho lweendaba emva kokuba ugqibile kwaye wenze nokuba yeyiphi imithombo yeendaba yokufaka i-USB okanye ifayile ye-ISO. Siza kuthatha ukuba wenza imithombo yeendaba yokufaka i-USB kule nkqubo, njengoko kuyeyona ndlela ilula yokwenza oku.
Ungasifumana njani isitshixo se-Windows 8.1 sokuvula?
Ukuhlaziywa ngakumbi kweefayile zokuqalisa zeWindows 8.1: Landela ezi nyathelo ezilula ukukhuphela i-Windows 8.1 key key: Inyathelo 2: Cofa ifolda ye-zip kabini ngokulandelelana ngokukhawuleza ukufikelela kwi-pkeyui.exe. ifayile. Kopisha ukhiye wemveliso yeWindows 8.1 njengoko unjalo.
Ndingayifaka njani iWindows 8.1 njengeqhosha eliqhelekileyo?
Ukongeza isitshixo sesiqhelo njenge-PID okanye ukuyifaka ngexesha lofakelo kuvumele umntu ukuba agqithe kwiscreen semveliso kwaye afake iWindows 8.1 'uHlelo' lokugcina inkqubo eyoyikisayo yokuhlaziya ngoGcino lweWindows. Emva kofakelo isitshixo semveliso sinokutshintshelwa kwiqhosha 'loHlelo' lweWindows 8.
Ndingasilanda njani isitshixo semveliso yeWindows 8.1?
Landela la manyathelo alula ukukhuphela isitshixo semveliso yeWindows: Inyathelo 1: Khuphela isitshixo semveliso seWindows 8.1 kwaye ugcine ifayile kwindawo efanelekileyo. Inyathelo 2: Cofa ifolda ye-zip kabini ngokulandelelana ngokukhawuleza ukufikelela kwi-pkeyui.exe. Inyathelo 3: Cofa kwifayile ephumezayo ukuqala inkqubo yokufaka